Abdirahman Abdi shakuur oo Farmaajo iyo Khayre Runta u Sheegay – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Abdirahman Abdi shakuur oo Farmaajo iyo Khayre Runta u Sheegay
Allhadaaftimo January 12, 2019 January 12, 2019 Uncategorized
Mw Farmaajo sharciyada caalamka ee lagu maamulo dowladda ma rabo inuu raaco. Sidaas si la mida ayuu u xooray dastuurka dalka iyo qawaaniinta u degsan dalka oo madax badan iyo maskax badan la soo geliyey.
Sharciyada caalamku waxey qabaan cida ku nool guri ama gacanta ku haya hanti ma guurto ah mido ka badan 25 sano iney xaq u leedahay lahaanshaheeda oo ay tahay in milkiyadeeda lagu wareejiyo ama isaga looga iibiyo qiimo aad u jaban.
Dowladii militeriga oo kelitaliska ahayd waxey dhibaato u geysatey hantida shacabka, waxeyna daadisay dhiig badan oo aan xisaabtooda la soo koobi karin, hanti ay ka tagtay oo ay leedahayna ma jirto oo hantidii maguurtada ahayd waxaa la wareegey dowlad goboleedyadii iyo dowladihii dhexe ee ka dambeeyey.
Waxaa meel ka dhac ah warqada uu soo saaray Rw Kheyre ee ku baadi goobayo dhulalkii dowladda dhexe ay ku lahayd Xamar, isaga oo ku sheegay 1991 wixii ka dambeeyey inuusan aqoonsaneyn dowladihii ka dambeeyey maamuladoodii la xiriirey dhulalka dowladda dhexe ku lahayd Xamar.
Xukunkii Milateriga dhulalka uu dadka ka dhacay haddii Farmaajo uu sax u haysto, kii dowladda rasmiga ahaa ee isaga ka horeyeyna uu ku tilmaamay sharci darro, hadde taas waa mid muujineysaa dagaalka uu kula jiro shacabka reer Muqdisho iyo madaxdooda, waana bilow daandaansi dagaal.
Hanti dowlad dhexe ka maqan ma jirto, laakiin abaabul dagaal bilowgiisa ayaa muuqda. Shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaa ka maqan hanti iyo naf, mana hayaan cid ay kala xisaabtamaan, sidaas daradeed madaxda dowladda dhexe marka hore ha sameyso dibuheshiisiin oo ha ogaato waxa lagu leeyahay iyo waxa ay leedahay oo ay dukumenti u haysato.
Farmaajo iyo Kheyre dalka waxey ku hogaamiyeen iney meel walba khatar dhexda ka geliyeen. Waxey Soomaaliya ku direen Qaramada Midoobey, waxey Soomaaliya cadow uga dhigeen wadamada Khaliijka, Waxay colaad Soomaaliya ugu abuureen wadamada ciidamada Amison ay ka joogaan iyadoo soo dhoweysaneysa cadowga Soomaaliyeed ee Itobiya. Waxey sidoo kale Soomaaliya ka horkeeneen Midowga Yurub iyo wadanka Ingriiska. Bal isweydiiye xagey Soomaaliya u wadaan oo uga go’doominayaan Caalamka.
Farmaajo hantidii Kacaanku ka tegey ha ka raadiyo Hargeysa, Garowe, iyo KIsmaayo, markaas kadib ha ka hadlo xisaabtanka yaala Xamar. Waxba Sooma kordhineyso liis wasiiro ka soo jeeda Xamar oo loo soo xulay in shacabka iyo madaxda Xamar lagu dhaco. Kheyre wuu ka joogsan la’yahay dibindaabyada uu ku hayo shacabka Muqdisho oo ku diidan adeega guracan ee uu u hayo Farmaajo iyo qowletsatanimada uu ku boobayo hantida dadweynaha.
Waxaan shaki lahayn waxa ay raadinayaan Farmaajo iyo Kheyre iney heli doonaan abaalmarintooda gudo iyo dibedba. Waxaa talo u baahan wasiirada loo soo xilsaaray iney sanka ka soo taabtaan madaxdii hore iyo inta ku fikirka ahayd oo sharafkooda, hantidooda, iyo aragtidooda lagu damacsan yahay in lagu burburiyo, si aysan u dhicin doorashada 2020 cid hanti iyo taageero u haysta oo aan Farmaajo iyo Kheyre ka ahayn oo goobjoog ka noqota soo gaarida xiligaas.
Previous Gudoomiayha Barlamaanka Puntland C/xakiin (Dhoobo ) ayaa kulan sagootina usameeyay wafdigii dhowaanahan ku sugnaa Garowe Dowladda Dhexe Ee Somaliya
Next Puntland way hadashay wixi dhimana wa la dhamaystira puntland ma ahan meel dowlada dhexe laga burburiyo ee waa meel laga dhiso dowladnimada.
Wasiir Maxamed Kaahin Oo Faah Faahiyey Heshiiska Kulmiye Iyo UCID Ka Gaadheen Arimaha Doorashooyinka April 23, 2019
Suldaan Kamida Salaadiinta Bariga Gobolka Sanaag Oo Ka Hadlay Kulan Ay La Qaateen Madaxwaynaha April 23, 2019
Odayaal reer Sanaag ah oo ka hulleelay Xisbiga Waddani April 23, 2019
Maxay Ka Wada Hadleen Madaxwaynaha Iyo Madaxdhaqameedkii Reer Sanaag April 22, 2019
Siyaasiyiin horay xilal u soo qabtay, Xildhibaano iyo Xisbiyo ayaa xilligan uu shir uga socdaa Hotel ku yaalla Magaalada Nairobi, kaasoo ay uga hadlayaan xaalada siyaasadeed ee dalka April 22, 2019
Archives Select Month April 2019 (82) March 2019 (128) February 2019 (95) January 2019 (148) December 2018 (129) November 2018 (99) October 2018 (104) September 2018 (98) August 2018 (98) July 2018 (93) June 2018 (130) May 2018 (124) April 2018 (97) March 2018 (140) February 2018 (93) January 2018 (131) December 2017 (113) November 2017 (95) October 2017 (84) September 2017 (98) August 2017 (121) July 2017 (120) June 2017 (94) May 2017 (119) April 2017 (112) March 2017 (117) February 2017 (139) January 2017 (118) December 2016 (89) November 2016 (114) October 2016 (98) September 2016 (91) August 2016 (95) July 2016 (91) June 2016 (73) May 2016 (68) April 2016 (55) March 2016 (100) February 2016 (67) January 2016 (71) December 2015 (73) November 2015 (58) October 2015 (64) September 2015 (81) August 2015 (60) July 2015 (60) June 2015 (52) May 2015 (43) April 2015 (59) March 2015 (57) February 2015 (62) January 2015 (96) December 2014 (22) November 2014 (69) October 2014 (133) September 2014 (144) August 2014 (38)